Midowga Yurub “ Sanad ka hor ayaan u sheegnay AMISOM in dhaqaalaha aan jareyno ” | Voice Of Somalia
Midowga Yurub “ Sanad ka hor ayaan u sheegnay AMISOM in dhaqaalaha aan jareyno ”
Posted on April 28, 2016 by Voice Of Somalia Image
Midowga Yurub ayaa ka jawaabay eedeymo maalmihii u danbeeyay ka soo yeerayay qaar ka mid ah dawladaha Afrinkaanka ah ee ciidamadooda gudaha Soomaaliya kaga jiraan dagaalka ay taageerayaan maamulka DF-ka.
Ergeyga gaarka ah ee Midowga Yurub ugu qaabilsan Soomaaliya Michele Cervone D’Urso oo wareysi siinayay wargeyska The Star ee dalka Kenya ayaa difaacay sababta ay u jareen 20 boqolkiiba dhaqaalaha ay ku bixiyaan howlgalka Ciidamada Shisheeyaha ee Soomaaliya.
Cervone ayaa ku andacooday in tallaabadan ay ku wargeliyeen dawladaha Afrika muddo sanad ka hor, ayna u sheegeen in Midowga Yurub kaligiis aanu dusha u ridan Karin culeyska dhaqaalaha.
Hoggaamiyeyaasha Ciidamada Shisheeyaha ayaa qaarkood maalmihii la soo dhaafay ku calaacalayay dhabar jab weyn iney ku noqon doonto tallaabadan, lagana yaabo iney meesha ka saarto waxa ay ku sheegeen guulihii ay ka gaareen dagaalka Al-Shabaab.
Michele Cervone D’Urso“Amisom Waxay Ku Fashilmeen La Dagaalanka Al Shabaab”
Laakin Ergeyga Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa ku adkeystay go’aankaas iney ka laaban doonin xittaa iyaga oo og in aan laga guuleysan Xarakada Al-Shabaab.
“Waan ognahay in wali aan laga adkaan Al-Shabaab, waana naga go’an tahay taageerada, laakin waxaa jira howlo kale oo laga qabanayo meelo kale, kuwaas oo aan dhaqaale ku bixineyno” ayuu yiri Michele Cervone D’Urso
Ergeyga Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa iska diiday iney maja-xaabinayaan howlgalka Ciidamada Shisheeye ee Soomaaliya isagoo yiri “La’aantaan halkaan lama soo gaareen” sida uu hadalka u dhigay.
Midowga Yurub ayaa sanad waliba ku bixiya duulaanka Afrikaanka ee Soomaaliya lacag dhan 200 Milyan oo dollar, waxaana dhaqaalahan ka faa’iideysta askarta shisheeyaha iyo dawladaha ay ka socdaan.
Ethiopia “Dhib badan ayaa nagu heysta Soomaaliya”.